Naqshadaynta funaanadda: naqshadaha ugu fiican ee noocyada dharka waaweyn | Hal-abuurka khadka tooska ah
Nerea Morcillo | 10/04/2022 10:17 | General, Dhiirrigelinta
Dunida moodada ayaa sii kordheysa wakiil, gaar ahaan inta u dhaxaysa naqshadeeyayaasha iyo naqshadeeyayaasha. Su'aasha ah in qof kastaa mar walba is weydiiyo waa, haddii naqshadeeyaha garaafyada runtii sidoo kale door muhiim ah ka qaato naqshadeynta t-shirt. Jawaabtu waa haa, naqshadeeyaha garaafku waa qayb ka mid ah 50% naqshadeynta maro gaar ah.
Maqaalkan, waxaan ku labisannay funaanado hal abuur leh si aan kuugu soo bandhigno qaar ka mid ah naqshadaha ugu caansan ee qaybta moodada. Intaa kaliya maaha, Waxaan sidoo kale si qoto dheer u sii wadi doonaa adduunka moodada oo waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah naqshadeeyayaasha ugu fiican adduunka.
1 fashion: waa maxay
2 naqshadaha t-shirt ugu fiican
2.1 aniga adidas
2.2 shaadhka guriga
2.3 funaanad Hermes
2.4 funaanad dior
2.5 Vans Custom
3 Qaar ka mid ah noocyada moodada ugu fiican
fashion: waa maxay
moodada ayaa lagu qeexaa iyada oo ka mid ah warshadaha ugu caansan adduunka. Ujeeddadeedu waa inay hindiso, naqshadayso ama abuurto qayb dhar ah. Laakiin ma aha oo kaliya naqshad kasta, tan iyo markii la naqshadeeyay, dhammaan dhaqanka, qiyamka iyo shakhsiyadda naqshadeeyaha iyo astaanta ayaa loo isticmaalaa.
Aad bay muhiim u tahay in la xoojiyo ujeedooyinkii hore ee naqshadeeye kastaa uu maskaxda ku hayo. Markaad nashqadayso, waxaad sidoo kale u labbisataa qofka fikradahaaga iyo qiyamkaaga. Sababtan awgeed, warshadaha moodada ayaa si aad ah loo aqoonsaday sannadihii ugu dambeeyay, oo ah mid ka mid ah qaybaha ugu qiimaha badan suuqa.
Fashionku wuxuu ku salaysan yahay xaqiiqda ah inay tahay koox kooxeed, taas oo ah, ma aha oo kaliya inay la shaqeyso naqshadeeyaha, laakiin labadaba kuwa naqshadeeya iyo kuwa sameeya oo diyaariya ayaa saameynaya. Taasi waa sababta sanado, fashion ayaa had iyo jeer ka sarreeya warshadaha kale, laakiin had iyo jeer ee asalka ah. Marka la nashqadeeyo, waxaa la tixgaliyaa qaybaheeda garaafyada iyo inay u shaqaynayso dadweynaha labadaba.
Qeybta warshadaha ayaa ah tan ugu dhaqsiyaha badan suuqa, mana ahan sababtoo ah dharku waa sixir, laakiin taa beddelkeeda, hadda waxaan haysanaa habab badan oo aan ku rari karno oo aan ku suuqgeyno dharka. Waa erey ama sifo sannado ka hor gebi ahaanba aan la qiyaasi karin, maadaama lagu iibin jiray suuqyo yaryar oo keliya ka dibna aan la gaadhin dad badan ama ballaadhan.
Fashion-ku wuu kobcayay, haddii aan ka hadalno naqshadeynta waxaan dhihi karnaa taas Waxa kale oo saamayn ku yeeshay arrimo siyaasadeed ama bulsho, oo ay ku jiraan dagaallo, kacdoonno, isbeddel bulsho, iwm. Mooshinku waxa uu ahaa saamayn iyo horudhac isbeddelladan. Taas oo ka dhigaysa warshadaha kacaanka ugu badan.
Waqtigan xaadirka ah waxaa jira naqshadeeyayaal badan oo sharad ku ah noocyada waaweyn. Noocyada soo baxay muddo ka dib si ay u noqdaan waxa aan aragno maanta.
Ugu dambeyntii, waxaa mudan in la xuso qiimaha sare ee dhaqaale ee ka soo baxa warshadaha moodada, qiimaha dhaqaale ee ka sarreeya 100 milyan sannadkii. Mana aha in nashqaduhu ay la xiriiraan, laakiin waa qiimaha la siiyay dhar kasta. Inta lacag ah ee la soo saaro waa wax aan la rumaysan karin.
naqshadaha t-shirt ugu fiican
Xigasho: The Toaster
Shaadhka Adidas RUN waa mid ka mid ah shaararka ugu iibka badan dhammaan warshadaha moodada. Waxayna u ekaan doontaa shaadhka fudud ee jaleecada hore, laakiin naqshadeeda ayaa ka tagaysa fariin qarsoon oo xiiso leh. Waa funaanad madow ama caddaan ah oo fartiisu ay aad u horumarsan tahay oo abuur tamar gaar ah oo ah astaanta dharka-ciyaaraha.
Sababtan awgeed, waxaa sidoo kale loo tixgeliyey mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan suuqa, oo la tartamaya noocyada kale ee tartanka sida Nike ama Reebok. Waa shaki la'aan t-shirt oo leh naqshad asal ah.
Xigasho: 1001 funaanado
Naqshada shaadhka Guriga oo nashqadeeyay makhaayad uu John Lennon tagi jiray, ayaa ka beddelantay adduunka moodada oo nashqaddeeda wata. Iyo halkii aan ahayn sababtoo ah naqshadeeda, laakiin sidoo kale sababtoo ah qiimaha ay leedahay. Sawirka heesaha ayaa ku qaatay sanado badan riwaayado waxayna si dhab ah u noqotay calaamad. Si aad u badan, in markii uu dhintay, qaar badan oo taageerayaashiisa ah ayaa rabeen inay helaan, maadaama ay noqotay mid aad muhiim u ah.
Waa shaadh madow oo leh astaanta Guriga ee aagga dhexe ee shaadhka cad.
Hermés waa calaamad caan ah oo dharka lagu yaqaan ee qaybta moodada. Ma aha oo kaliya inay noqotay astaan ​​heersare ah oo muhiim u ah naqshadaheeda, laakiin sidoo kale saamaynta ay nashqada ku yeelatay mid ka mid ah dharkeeda, gaar ahaan funaanadda.
Waxa uu shaadhka u adeegsaday harag yaxaaskamacno ahaan shaadhka oo dhan waxa uu ka samaysan yahay maqaarka yaxaaska, wax soo jiitay dareenka daawadayaasha iyo naqshadeeyayaasha warshadaha. Shaki la'aan, naqshad aad u cajiib ah iyo sidoo kale mid aad u qiimo badan.
Dior sidoo kale waa mid ka mid ah noocyada ugu qiimaha badan ee suuqa, si aad u badan si ololaha guga, waxaan go'aansaday in aan naqshadeeyo t-shirt oo leh fariin dumar ah. Dhambaal dunida dacalladeeda maray maadaama ay ahayd xasuusin yar oo naagtii lagu tusi jiray halyeyga oo fanka loogu daray kacaan ahaan.
Soo jeedin si weyn loogu guulaystey intii lagu guda jiray socod-barashada, iyo dhar soo jiitay dhammaan dadkii goobta joogay. T-shirt ma aha oo kaliya in lagu garto fariintiisa, laakiin sidoo kale qiimaha, maadaama ay qaali tahay.
Vans waa astaan ​​soo saarta oo naqshadaysa dharka-ciyaaraha, oo ay si qoto-dheer u dhiiri galiyeen dharka magaalada oo ka dhigaya mid u shaqeeya dadka iska barafka leh. Shaararkiisa waxa uu ku isticmaalaa midabyo dhalaalaya sidoo kale waxa uu naqshadeeyaa sawiro daan-jabin ah. Waa mid ka mid ah calaamadaha, ag Santa Cruz ama DC, Waxay ilaalinayeen khadka isboortiga sanado badan waxayna ka soo horjeedaan inta kale ee suuqa.
Ma aha oo kaliya calaamadaha wanaagsan ee qiimaha, laakiin sidoo kale tayada alaabtooda, tan iyo markii ay isticmaalaan dhar tayo sare leh oo siinaya aqoonsi sare.
Qaar ka mid ah noocyada moodada ugu fiican
Shirkadda caanka ah ee caanka ah ee dharka isboortiga, Nike, iyoWaxaa loo arkaa astaanta labaad ee ugu fiican adduunka. Oo aan la filanayn in ay noqon doonto calaamad isboorti, maadaama alaabooyinkeedu ay yihiin kuwo tayo fiican leh oo ay ku bixiyaan kala duwanaansho kala duwan. Waxay ahayd astaanta ugu caansan tan iyo qaar badan oo ka mid ah ciyaartoyda caanka ah iyo fannaaniinta adduunka oo dhan waxay la saxiixdeen Nike mar ka mid ah xirfadahooda.
Shaki la'aan, Nike waa mid ka mid ah noocyada ugu dhow ee qof walba gaari karo oo ku habboon naqshadeeda.
Gucci waa shirkad dharka ah oo asal ahaan Talyaani ah. Waxaa lagu taxay mid ka mid ah noocyada ugu qaalisan ee warshadaha oo dhan. Mana aha in la filayo, tan iyo naqshadeeyeheeda ayaa doortay khad fiican oo raaxo leh. Waxa uu ahaa ka qaybqaatayaal badan oo moodooyinka casriga ah ee Milano waxana uu la shaqeeyay dad badan oo caan ah., kuwaas oo u qaabilsanaa xayaysiinta astaantan iyo bixinta aqoonsiga ay mudan tahay.
Shaki la'aan, waa mid ka mid ah noocyada caanka ah ee guulo waaweyn ka gaaray suuqa, waxaa intaa dheer, aan laga dareemin qaar ka mid ah daaqadaha dukaamada ee adduunka.
Dior waa mid kale oo ka mid ah noocyada ku tartamaya Gucci abaalmarinta aqoonsiga ee sumadda ugu guulaha badan iyo qiimaha. Shirkadda Faransiisku waxay had iyo jeer u taagan tahay naqshadaheeda gaarka ah iyo kuwa gaarka ah. Shaki la'aan waa sawirka moodooyinka badan iyo atariishooyinka badan. Sidoo kale waa mid ka mid ah noocyada isku dayaya inay la xiriiraan jiilalka cusub, taas oo sahlaysa kobaca astaanta iyo matalaaddeeda ugu badan.
Haddii aad raadinayso tayada iyo raaxada, waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee qaybahan iyo midka ugu badan ee soo saara.
Waanu ka tagi kari waynay summada caanka ah iyo shirkadda Balenciaga. Waa mid ka mid ah noocyada la socda Gucci, dhab ahaantii, had iyo jeer waxay ku tartamayaan tusbaxyo isku mid ah iyo cawsyo isku mid ah. Waa calaamad dhab ah oo leh qiime sare oo dhaqaale. Taas oo macnaheedu yahay in ay tahay mid ka mid ah calaamadaha sidoo kale la shaqeeya saraakiisha sare waxaana dalacsiiyay fanaaniin waaweyn, naqshadeeyayaasha, atariishooyinka, fannaaniinta iyo xitaa ciyaartoyda kubbadda cagta.
Waa mid ka mid ah noocyada isku dayaya inay gaaraan xitaa daawadayaasha da'da yar laakiin aan ka fogaan dhawaaqeeda rasmiga ah. Waa sumadda heerka sare ee suuqa shaki la'aan.
Dunida moodada waa mid aad u ballaaran oo aan u baahanahay maalmo, bilo iyo xitaa sanado si aan si fiican u baranno. Waana in maalin kasta ay jiraan calaamado badan oo ku biira warshado kuwaas oo ka qaybqaatay dhaqaalaha iyo dhaqanka muddo tobanaan sano ah.
Waxaan rajeyneynaa in qaar ka mid ah naqshadaha funaanadaha ee aan ku tusnay inay soo jiiteen dareenkaaga inta aan haysano, waxaan sidoo kale kugu martiqaadeynaa inaad sii wadato baaritaan dheeraad ah oo ku saabsan qaybta moodada iyo dhinacyo kala duwan, oo aad bilowdo abuurista naqshadahaaga ugu horreeya iyo kuwaaga noocyada dharka ugu horreeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » naqshadaha shaadhka